Ọganihu: nkwalite ahụike na klọb egwuregwu
N'ọgwụgwụ nkuzi a, ị ga-enwe ike:
na-arụ ụka mmasị nke ịkwalite nkwalite ahụike na ụlọ egwuregwu
kọwapụta njirimara bụ isi nke usoro mmekọrịta ọha na eze na gburugburu ebe obibi yana usoro klọb egwuregwu na-akwalite ahụike (PROSCESS)
dabere na mmemme nkwalite ahụike ha na usoro PROSCESS
chọpụta mmekorita iji guzobe ọrụ nkwalite ahụike ha
Ụlọ egwuregwu egwuregwu bụ ebe ndụ na-anabata ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị sonyere, ndị nọ n'afọ ndụ niile. Ya mere, o nwere ikike imezi ahụike na ọdịmma nke ndị òtù ya. MOOC a na-enye gị isi ihe iji guzobe ọrụ nkwalite ahụike n'ime ụlọ egwuregwu.
Usoro nkuzi na-adabere na mmega ahụ na ihe ngosi bara uru, iji tinye ihe ndị a na-ahụ anya. A na-agbakwunyere ha site na akaebe sitere na klọb egwuregwu, ọmụmụ ihe na ngwaọrụ, yana mkparịta ụka n'etiti ndị sonyere.
Ọganihu: nkwalite ahụike na klọb egwuregwu Ọnwa Iri na Abụọ 18, 2021Tranquillus
GỤỌ Mepụta saịtị ma ree Podia ọzụzụ gị n'ịntanetị
gara agaAkụkọ (s) nke Belgium
-esonụNlekọta mgbe Covid-XNUMX gasịrị
Efu: Nzọụkwụ mbụ gị na Pinterest
Ozi na mgbochi nleta ahụike
Ndị na-adịghị ike: nkwado maka ọrụ ele mmadụ anya n'ihu
Melite arụpụtaghị ma nweta ihe mgbaru ọsọ